Armenian အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(534 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
အာမေးနီးယားတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအင်တာနက်ပေါ်ရှိလောင်းကစားအမျိုးအစားအားလုံးကိုအာမေးနီးယား၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏ဥပဒေအရတရားဝင်ဥပဒေရေးရာဖြစ်သကဲ့သို့, ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်တက်ကြွစွာအောင်မြင်နေသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းပြည်နယ်လိုင်စင်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်နေဒေသခံအွန်လိုင်းအော်ပရေတာများနှင့်နိုင်ငံခြားသူမြားကိုနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်။
များစွာသောဘာသာစကား Armenian နိုင်ငံသားများရုရှားမပြောတတ်ကတည်းကသူတို့ရုရှား၌မိမိတို့န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကမ်းလွန်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များပေါ်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခံစားရန်မတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အခြားဘာသာစကားများဖြင့်နိုင်ငံခြားက်ဘ်ဆိုက်များဘာသာစကား Armenian ဂိမ်းကစားသူတို့တွင်လည်းလူကြိုက်များကြသည်။ မိုဘိုင်း လောင်းကစားဝိုင်းဖြစ်ပါသည် ထို့အပြင်အာမေးနီးယားအတွက်အလွန်လူကြိုက်များအမျိုးမျိုးမိုဘိုင်းဖုန်းများပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်အဖြစ်အမြဲတစေကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်တိုင်းပြည်မြေပြင်နှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲကြောင်းလောင်းကစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းကက်တလောက်အတွက်ကိုသတိပြုပါ။
ထိပ်တန်း 10 Armenian အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
အာမေးနီးယား၏လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏သမိုင်းကိုပြန် 20th ရာစုမှစတငျ။ 1936 အာမေးနီးယားခုနှစ်တွင်ဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဲဒီအခြိနျမှာနိုငျငံ၌လောင်းကစားဝိုင်းများ၏တစ်ခုတည်းသောဥပဒေရေးရာအမျိုးအစားများလူမျိုးနှင့်ပြည်နယ်ထီအပေါ်အလောင်းအစားခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့, အာမေးနီးယားဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးနောက်လောင်းကစားလုပ်ငန်းသို့တိုးမြှင်သိရသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းပထမဦးဆုံးလောင်းကစားခန်းမ 1990 ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ပထမဦးဆုံးလောင်းကစားရုံ 1991 ၌ထငျရှားခဲ့သညျ။
လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုများစွာစသည်တို့ကိုဘင်ဂိုကစားခန်းမ, ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, Bookmakers အပါအဝင်, ယနေ့အာမေးနီးယားအတွက်လည်ပတ် ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အာမေးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးလိုင်စင်များ၏အခြေခံပေါ်မှာလည်ပတ်။ ဦးဆောင်လောင်းကစားဝိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ 2008 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Vivaro လောင်းကစားဖြစ်ပါသည်။ သည်အခြားစျေးကွက်ပါဝင်သူများအနက် Totto ဂိမ်း, Goodwin-လောင်းကစားနှင့် Yntanekan Loto ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းအော်ပရေတာများ၏ပြင်းထန်သောခုခံနေသော်လည်း 2014 အတွက် Armenian အဘိဓါန်ပါလီမန်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို Jermuk, Tsakhkadzor, Sevan သကဲ့သို့, တိုင်းပြည်အတွင်းအားလုံးလောင်းကစားရုံခရီးသွားဇုန်အတွက်ဖြစ်သင့်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့တဲ့ဥပဒလွန်
အာမေးနီးယားတစ်ခုမမေ့နိုင်သောအရောင်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သဘောသဘာဝနှင့်အတူတစ်မူရင်းနှင့်ရှေးခေတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသမိုင်းအမြစ်များနှင့်ခေတ်မီခြင်းနှင့်အသစ်သောနည်းပညာများကိုရန်သတိထားသဘောထားကိုပေါင်းစပ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အာမေးနီးယားအတွက်အနားယူကြောင့်ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးကော့ညက်မြည်းစမ်းဖို့နဲ့ chic ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်အချိန်ဖြုန်းဖို့ကျိုးနပ်သည်။ CasinoToplists သောအရာတို့ကိုတကယ်ခေတ်မီအာမေးနီးယားအွန်လိုင်းနှင့်မြေပြင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူရှိသောဘယ်လောက်ထွက်တွက်ဆဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ယခုအချိန်တွင်နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာမှဝင်ရောက်ခွင့် toughening အပေါ်ဥပဒေကြမ်းဆွေးနွေးတင်ပြလျက်ရှိသည်;
အကျော်ကြားဆုံးမြေယာကာစီနိုလောင်းကစားရုံ: "အထက်လွှတ်တော်အမတ်", "ရှန်ဂရီလာ, La";
အာမေးနီးယားတစ်ခုမမေ့နိုင်သောအရောင်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သဘောသဘာဝနှင့်အတူတစ်မူရင်းနှင့်ရှေးခေတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသမိုင်းအမြစ်များနှင့်ခေတ်မီခြင်းနှင့်အသစ်သောနည်းပညာများကိုရန်သတိထားသဘောထားကိုပေါင်းစပ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အာမေးနီးယားအတွက်အနားယူကြောင့်ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးကော့ညက်မြည်းစမ်းဖို့နဲ့ chic ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်အချိန်ဖြုန်းဖို့ကျိုးနပ်သည်။ CasinoToplists ပွညျ၌နှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်နှစ်ဦးစလုံးအရာကယ့်ကိုခေတ်သစ်အာမေးနီးယားမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူရှိသောဘယ်လောက်ထွက်တွက်ဆဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်အာမေးနီးယား၏ဥပဒေများကို - သမိုင်းနောက်ခံ
1921 - 1928 အာမေးနီးယားဟာ ZFSFR ပြီးတော့ဆိုဗီယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း allowed.Since 1928, ဆိုဗီယက်၏တစ်ခုလုံးကိုပိုင်နက်အပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှုဖြစ်ပါတယ်။
1936 ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်အာမေးနီးယား။ ရီရဲဗန်အတွက်ပြိုင်ကားကွင်းနှင့်ထီခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
1991 လိုင်စင်အပေါ်ဥပဒေ: အာမေးနီးယားအမှတ် 161 သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးများကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်။ ရီရဲဗန်အတွက် 1st လောင်းကစားရုံများဖွင့်လှစ်။ လိုင်စင်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
1992 ဝင်ငွေအခွန်ပေါ်အကျင့်တရားလောင်းကစားရုံဝင်ငွေ -70% ပြည်နယ်မှပေးသည်။
1998 "Fixed ငွေချေမှုတွင်" ပညတ္တိကျမ်း - တိုင်းပြည်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းစုစည်းဖို့ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးအမြတ်အစွန်းဖြစ်လာသည်။
2000 သမ္မတရောဘတ် Kocharian "ဂိမ်းများနှင့်ဂိမ်းအိမ်များအနိုင်ရရှိမှုတွင်" ဥပဒေအမှတ် 102 လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ - ထိုလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဂိမ်းအိမ်သူအိမ်သားတစ်ခုသို့မဟုတ်ဂိမ်းကစားခြင်းခန်းမဖွင့်ပွဲများအတွက်လိုင်စင်။ သငျသညျ 21 နှစ်ပေါင်းထံမှကစားနိုင်ပါတယ်။
2001 "လိုင်စင်တွင်" ပညတ္တိကျမ်း - လိုင်စင်ရယူလောင်းကစားဝိုင်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရှုပ်ထွေးအစီအစဉ်အပေါ်အခြေခံသည်။
2004 "တစ်ဦးအနိုင်ရရှိနှင့်အတူဂိမ်းများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းအိမ်များတွင်။ " ဒီဥပဒေ slot ကစက်၏ fixed ပြန်လာရီရဲဗန်၏မြို့တော်ဖို့လောင်းကစားရုံ၏ 86% .Distance ဖြစ်ပါတယ်မှာအနည်းဆုံး 50 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။
2016 - 2017 လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်။ အွန်လိုင်း Bookmakers များအတွက်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်အတွက်တိုး5ကြိမ် (က $ 207,000 ကြီးက $ 1 သန်းခဲ့) ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယဝန်ကြီး။ အာမေးနီးယား Pavel Safaryan ၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနိုင်ငံခြားလောင်းကစားဝိုင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားအော်ပရေတာများ၏လှုပ်ရှားမှုများလိုင်စင်အပေါ်တစ်ဦးဥပဒေကြမ်းပေးအပ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ပညတ္တိကျမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဤတိုင်းပြည်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကလိုင်စင်ရှိပြီးဖြစ်သောအာမေးနီးယားအတွက်အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံအတွက်ကစားပါလျှင် - သင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုံးဝဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလက်ရှိတားမြစ်ထားသောသည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ခြေရာခံသည်မဟုတ်ကတည်းကသင်, နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာများ၏က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်မှာကစားနိုင်ပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်စင်နှင့်အတူမည်သည့်လောင်းကစားရုံရွေးချယ်နိုင်သည်။
မည်သည့်ဘာသာစကား Armenian လုံခြုံစွာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားပျော်မွေ့ခြင်းနှင့် access ကိုပိတ်ထားပါလိမ့်မည်သူသည်မိမိအနိုင်ရရှိတဲ့ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းမကြောက်နိုင်ပါတယ်နေချိန်မှာအဘယျသို့နိုင်ငံခြားလောင်းကစားရုံ၏လိုင်စင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုများပြီးဆုံးသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်။
တစ်ဦးလောင်းကစားရုံကိုရွေးချယ်ပါ ။ အဓိကစံနှုန်းယုံကြည်စိတ်ချရ, လိုင်စင်နှင့်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်။ ညာဘက်ကော်လံအာရုံစိုက်, ဒီလုပ်ဖို့ - ကျနော်တို့စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးသောလောင်းကစားရုံ, အကြံပြုပါသည်။
ကျနော်တို့လောင်းကစားရုံဂရုတစိုက်လေ့လာ ။ သငျသညျငွေကစားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အချက်အလက်အားလုံးကိုအများပြည်သူဒိုမိန်းအတွက်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်များကိုအထူးဂရုပြု:
လိုင်စင်, လိပ်စာများနှင့်လောင်းကစားရုံ၏အဆက်အသွယ်များရရှိနိုင် (တယ်လီဖုန်း, chat);
ကွန်ယက်ပေါ်မှကစားသမားသုံးသပ်ချက်များ (အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုဖြစ်သင့်တယ်, မဟုတ်ရင်ကအများဆုံးဖွယ်ရှိ PR စနစ်ဖြစ်စေ, ဒါမှမဟုတ်ဒါခေါ် "အနက်ရောင်" PR စနစ်ဖြစ်၏
ပိုက်ဆံဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ။ တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံခြားလောင်းကစားရုံ funds.Specify ဝင်ရောက်နှင့်ဆုတ်ခွာဘို့အများအပြား option များကိုလည်းကမ်းလှမ်းထား, သင်တို့အဘို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်သောအရာသူတို့တွင်လည်းမရှိ။ ဂိမ်းကစားနိုင်သည့်အတွက်ငွေကြေးအာရုံစိုက်။ ထိုအကိုလည်းအနိုင်ရရှိ၏ဆုတ်ခွာ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအာရုံကို (ကြီးမားသောအနိုင်ရရှိတဲ့အချိန်မှာတချို့လောင်းကစားရုံအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်း) ။
ငါ software ကို download လုပ်ပါဖို့လိုတယ်နှင့်ကွန်ပျူတာများ၏နည်းပညာပိုင်းဝိသေသလက္ခဏာများဘာတွေလုပ်နေလဲပါသလား
ဒါဟာစမ်းသပ်မှု mode မှာအခမဲ့ကစားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား?
ဖောက်သည်မှသစ္စာရှိမှုစနစ်က - ဒါကြောင့်အပေါ်ဆုကြေးငွေ, ပြန်အမ်းနဲ့။
ကျနော်တို့စမ်းသပ် mode မှာပထမဦးဆုံးကစားရန်အကြံပြုနှင့်ဂရုတစိုက်ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖတ်ပါ။ ဤ (စသည်တို့ကို baccarara, Blackjack) ကဒ်ဂိမ်းများကိုများအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။
ကျနော်တို့ရှည်လျားသောအကွာအဝေးများအတွက်လောင်းကစားရုံအမြဲတမ်းအနိုင်ရ၌တည်သောသင်သတိပေး, သင်မူကားအစဉ်အမြဲစိတ်ဝင်စားဖို့အချိန်ဖြုန်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, သင်ကံကောင်းကြလိမ့်မည်။ ပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့ bankroll ထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်ဂိမ်း၏ပျော်စရာတိုးချဲ့ဖို့, စနစ်များနှင့်ဂိမ်းမဟာဗျူဟာများပေါ်မှာငါတို့အပိုင်းကိုဖတ်ပါ။
အကောင်းဆုံးလောင်းကစားဝိုင်းအိမ်များအပြင်ဘက်ရီရဲဗန်၏အလုပ်လုပ်သောကြောင့် Zvartnots ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်သောလမ်းတလျှောက်တွင်တည်ရှိသည်။
ကာစီနို "အထက်လွှတ်တော်အမတ်" တစ်ဦးလောင်းကစားရုံတစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်တစ်ကလပ်နှင့် Lounge ဘားလည်းမရှိသည့်အတွက်ဖျော်ဖြေရေးရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုကမူရင်းပြပွဲအစီအစဉ်ဧည့်သည်များအဘို့အစီစဉ်ပေးထားပါသည်။ တိုင်းစနေနေ့စုဝေးပွဲကိုရှိပါတယ်။ သည် "အထက်လွှတ်တော်အမတ်" တွင်သင်သည်ကစားတဲ့, Blackjack, ဖဲချပ်များနှင့်အထိုင်စက်တွေအများအပြားမျိုးပေါင်းကစားနိုင်ပါတယ်။
ရှန်ဂရီလာ, La ကာစီနို အဆိုပါမြို့ပြမြို့ကန့်သတ်ခြင်းမှပဲ2ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားစားပွဲများစွာ, VIP ခန်းမ, ခေတ်သစ် slot နှစ်ခုရာပေါင်းများစွာ, သုံးအရက်ဆိုင်, အဘိဓါန် Armenian- နှင့်တိုက်ကြီးတွင်အစားအစာနှင့်အတူစားသောက်ဆိုင်: အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ၏အဆင့်မှာဝန်ဆောင်မှုပေး, အများဆုံးလေးစားမှုဘားစောင့်ရှောက်။ ပုံမှန်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြက်လုံးသေချာပေါက်ကျင်းပကြသည်။
ပို. ပို. , အဖွဲ့အစည်းများကစားသမားအပေါငျးတို့သစိုးရိမ်ပူပန်နေကြရသည်။ မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ junket ခရီးစဉ်ပေါ်လာတော့တယ်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ၏ဧည့်သည်များလွှဲပြောင်း, နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်ချစ်ပ်များ၏အချို့သောနံပါတ်, ဒါပေမယ့်လည်းကြွယ်ဝတဲ့လေ့လာရေးအစီအစဉ်တွင်မသာသိုက်၏အချို့သောငွေပမာဏအဘို့ပူဇော်ကြသည်။
အာမေးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုအတိုင်းအတာအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်, နယ်မြေအကြောင်းကို 30 တထောင်စတုရန်းကီလိုမီတာဖြစ်ပြီး, လူဦးရေသာအနည်းငယ်ပိုပြီး3သန်းထက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ဤထောင့်များ၏သမိုင်းကိုဘယ်လိုချမ်းသာကြွယ်ပါ!
အာမေးနီးယား Transcaucasia ထဲမှာ, အနီးအရှေ့တွင်တည်ရှိသည်။ တိုင်းပြည်အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းများဂျော်ဂျီယာ, အဇာဘိုင်ဂျန်, တူရကီ, အီရန်, Nagorno-Karabakh ဖြစ်ကြသည်။ မြို့တော်ရီရဲဗန်, ပြည်နယ်သင်သည်ဘာသာစကား Armenian ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းနီးပါးကြှမျးကငျြစှာရုရှားပြော၏။
အာမေးနီးယား၏တည်နေရာကိုပြန် 1.9 သန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကာလမှ, အခြေချနေ့စွဲ၏ပထမသဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိတ်အာမေးနီးယားဟီရိုဒိုးတပ်များ၏မြေပုံပေါ်တွင်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, နယ်မြေအမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်နှင့်အင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ခေတ်မီနယ်စပ်နှစ်ဆယ် century.In 1991 အာမေးနီးယားအတွက်သာဝယ်ယူတိုင်းပြည်တခုလွတ်လပ်သောပြည်နယ်ဖြစ်လာခဲ့သည် - တစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲသမ္မတနိုင်ငံ။
Matenadaran ။ နေရပ်လိပ်စာ: 53 Mashtots ရိပ်သာလမ်း, ရီရဲဗန် 0009, အာမေးနီးယား။
ရည်းစားများပန်းခြံ ။ နေရပ်လိပ်စာ: 21 မာရှယ် Baghramyan Ave, ရီရဲဗန် 0019, အာမေးနီးယား။
အဆိုပါအပြာရောင်ဗလီ ။ နေရပ်လိပ်စာ: 12 Mesrop Mashtots Ave, ရီရဲဗန် 0015, အာမေးနီးယား။
အာမေးနီးယားအမျိုးသားသမိုင်းပြတိုက် ။ နေရပ်လိပ်စာ:4သမ္မတနိုင်ငံရင်ပြင်, ရီရဲဗန်, အာမေးနီးယား။
အောင်ပွဲပန်းခြံ ။ နေရပ်လိပ်စာ: Azatutyan Ave, ရီရဲဗန်, အာမေးနီးယား။
Paleobalkan - အဆိုပါဘာသာစကား Armenian ဘာသာစကားများအထူးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပိုင်ဆိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောလူနေမှု, ဆက်စပ်သင်သည်ဘာသာစကား Greek ဖြစ်ပါတယ်။
အာမနေီအက္ခရာဟာ Cyrillic အက္ခရာမတိုင်မီထင်ရှား။ , 406 ထဲမှာ Mesrop Mashtots အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်နှင့် (ကိုရီးယားနှင့်ဂျြောဂြီယနျနှင့်အတူ) ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးစုံလင်သောများထဲမှစဉ်းစားသည်။
တောင်ပေါ်ကအာရမနိအာမေးနီးယား၏သင်္ကေတဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ 1921 ကတည်းကကတူရကီ၏ပိုင်နက်အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။
Armenian အဘိဓါန်ပန်းသီးဥရောပမှာ apricots တစ်ဘုံအမည်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
အာမေးနီးယားကြီးမြတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏မွေးရပ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်ဇန်တီယမ်ထက်ပို 80 စစ်ဘုရင်များအာမေးနီးရှိကြ၏။ တဦးတယောက်တည်းအသေးရွာဆိုဗီယက်2ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု 11 သူရဲကောင်းများကိုပေး၏။
နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ကောင်းသောဖြစ်တယ်, သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကြည့်ဖို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အရမ်းလေးစားမိပါတယ်ဖို့တစ်ခုခုရှိသေး၏။ နှင့်အာမေးနီးယားဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်ချွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတာနဲ့ဒီသမ္မတနိုင်ငံထဲမှာ, ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးချင်းစီကိုမိမိတို့အဘို့တစ်ခုသိမ်းပိုက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်: တစ်စုံတစ်ဦးက၎င်း၏မြင်ကွင်းများစဉ်းစားနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးလောင်းကစားရုံအတွက်, ဥပမာ, ဖျော်ဖြေရေးထူထောင်မှုအတွက်အပန်းဖြေဖို့လေ့လာရေးခရီးပိုနှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်။
စုစုပေါင်းခုနှစ်တွင်အာမေးနီးယားမှာရှစ်လောင်းကစားရုံရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားထူထောင်မှု Flamingo, ဖါရောမင်းသည်, ရှန်ဂရီလာ, La, အထက်လွှတ်တော်အမတ်နှင့်အခြားသူများလောင်းကစားနေကြသည်။ ဤအလောင်းကစားထူထောင်မှု၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ကစားသမားတစ်ဦးကြီးမားသောလောင်းကစားဂိမ်းဌန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။
ဥပမာ, လောင်းကစားရုံ << Shangri La ရီရဲဗန် >> အဆိုပါသမ္မတနိုင်ငံအတွက်အများဆုံးခေတ်သစ်လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီလောင်းကစားရုံမှအဆိုပါဝင်ပေါက် $ 100 (က pass အသက် 21 နှစ်ကျော်သာလူတွေကအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်) ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤပိုက်ဆံရုံဝင်ပေါက်လက်မှတ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတက်စေပါဘူး: သူတို့ထို့နောက်ကစားနိုင်သည့်ချစ်ပ်များအတွက်ဖလှယ်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံတော်တော်များများဂိမ်းကစားခန်းမတစ်ခုလက်ရာမြောက်သောစားသောက်ဆိုင် << Michelangelo Launch >> VIP ကစားသမားများအတွက် CW ကလပ်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံမှန်မှန်ငွေသားအနိုင်ရရှိတဲ့, အပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှု (အခမဲ့မီးဖိုချောင်အခမဲ့ဝင်ပေါက်, etc) မှညာဘက်ကိုပေးသနားတော်မူသောအကလပ်ကတ်များတစ်ဦးစနစ်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောထီနှင့်ပြိုင်ပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံအဆောက်အဦးအာမေးနီးယားအတွက်အများဆုံးပါသောအရပ်တို့ကိုတယောက်ကိုခေါ်နိုင်သည့်ရီရဲဗန်-Sevan အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ 10 ကီလိုမီတာပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါရှန်ဂရီလာ, La ဖျော်ဖြေရေးရှုပ်ထွေးသော၏ပိုင်နက်တွင် 100 ကားများအဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်ကားများ, များအတွက်ကားပါကင်တွေအများကြီးရှိသေး၏။ ဒါကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကစားသမားရန်မလိုပါထားခဲ့ဖို့ဘယ်မှာစိုးရိမ်။ သငျသညျတက္ကစီအားဖြင့်လောင်းကစားရုံကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျချင်လျှင်, သင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်နှင့်ဂိမ်းတစ်ခုခရီးစဉ်များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအခမဲ့ဟိုတယ်အခန်း, VIP ဝန်ဆောင်မှု 10% နေ့စဉ်ပြန်လာအရှုံးနှင့်အများကြီးပို (ဗီဇာနှင့်အတူတခြားနိုင်ငံတွေကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ်အပါအဝင်) ကိုလောင်းကစားရုံမှအခမဲ့ခရီးသွားလာမှုပါဝင်သည်။
အာမနေီလောင်းကစားရုံများတွင်တစ်ဦးကဂိမ်းကစားခရီးစဉ်ကိုလည်းလောင်းကစားတည်ထောင်ခြင်း "Sun ကနန်းတော်" ကကမ်းလှမ်းနေသည် , ရီရဲဗန်မှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒီလောင်းကစားရုံ၌သငျကစားတဲ့, က Black jack ကို, အရိုး, Baccarat, ကာရစ်ဘီယံနှင့်ရုရှားဖဲချပ်ဝေ, ဗီဒီယိုဖဲချပ်ကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းတွေနဲ့ပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်, 100 slot ကစက်တွေကျော်ရှိပါတယ်, etc ကြီးမားသောနှုန်းထားများမှာဂိမ်းပရိသတ်တွေအတွက်, VIP အခန်းထဲမှာအကျင့်ကိုကျင့် ။
ဒီလောင်းကစားရုံအပေါင်းတို့၌အနိုင်ရရှိတဲ့ကစားသမား .A လုံခြုံရေးအစောင့်အကြပ်ပေးနိုင်ပါသည် (ယူရို, ရူဘယ်) ကိုရွေးကောက်ပြီးငွေကြေးအတွက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပေးဆောင်ရသည်။
လောင်းကစားဝိုင်းမှထို့အပြင်ခရီးစဉ်ရီရဲဗန်ပတ်လည်အပန်းဖြေခရီးစဉ်များနှင့်ရေကန် Sevan တစ်ခုလေ့လာရေးခရီးပါဝင်သည်။
ဒါပေမယ့်လောင်းကစားရုံ "အထက်လွှတ်တော်အမတ်" Argavand ၏နယ်စပ်များနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်။ Tayrov ။ အာမေးနီးယား၏ဤလောင်းကစားရုံအဖြစ်ဖောက်သည်များ၏ရွေးချယ်မှုအတွက်, ဖျော်ဖြေရေး၏ကြီးမားသောရှေးခယျြမှုအများအပြားဂိမ်းကစားခန်းမ, ကြွင်းသောအရာများအတွက်သောနေရာများ, တစ်ဦး bar မှာကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ နှင့်မကြာသေးမီက, ဒီဖျော်ဖြေရေးရှုပ်ထွေးအတွက်အသစ်တခုစားသောက်ဆိုင်, သင်သည်ဘာသာစကား Armenian အီရန်နှင့်ရုရှားအစားအစာ၏ဟင်းလျာများကိုမြည်းစမ်းနိုင်သည့်အတွက်အလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အရာအားလုံးဒဏ်ငွေပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လာမယ့် 2013 ထဲမှာ, လောင်းကစားရုံအာမေးနီးယားထားပြီးဥပဒေပြုခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်သောအထူးလောင်းကစားဝိုင်းဇုန်မှလွှဲပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါနှစ်သစ်၏အစကနေ, လောင်းကစားသာ Jermuk, Tsakhkadzor နှင့် Sevan များ၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်အတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံ၏တည်နေရာ, တာဝန်အခြေအနေများဆေးရုံများ, အစိုးရအေဂျင်စီများ, ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 500 မီတာနှင့်ပိုပြီးအကွာအဝေးများအတွက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတအဖြစ်လောင်းကစားထူထောင်မှု၏ဧရိယာ၏သဘောတူညီခဲ့အရွယ်အစားကနေဝေးလံဖြစ်လိမ့်မည်: တစ်များအတွက် လောင်းကစားရုံကြောင့် 250 စတုရန်းမီတာမှ၎င်း, တစ်ဦးအနိုင်ရရှိနှင့်အတူဂိမ်းများအတွက်ဖြစ်သင့် - 100 စတုရန်းမီတာထက်မနည်း။ လောင်းကစားရုံတည်နေရာပြောင်းလဲမှု၏ကနဦးအာမေးနီးယား၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 Armenian အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.0.1 လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်အာမေးနီးယား၏ဥပဒေများကို - သမိုင်းနောက်ခံ
3.1.2 Asia ၏မြေပုံပေါ်တွင်အာမေးနီးယား
4 အာမေးနီးယား၏ကာစီနို, အာမေးနီးယားမှာအကောင်းဆုံးကိုမှန်ကန်လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှု
ဂိမ်း walkthrough တွန်း